तराई मधेस केन्द्री कविता संग्रह सहरबिनाको सहर प्रकाशित - Rajmarga
तराई मधेस केन्द्री कविता संग्रह सहरबिनाको सहर प्रकाशित
वरिष्ठ साहित्यकार दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’ को कवितासंग्रह ‘सहरबिनाको सहर’ प्रकाशित भएको छ । तराई र मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेर पुडासैनीले रचेका तराई मधेस केन्द्री बाउन्न कविताहरु यस संग्रहमा समावेश छन् ।
वरिष्ठ समालोचक एवं साहित्यकार डा. राजेन्द्र बिमलले ‘दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’ को कविता संग्रह सहर बिनाको सहर नेपाली भाषामा रचिएको तराई मधेस केन्द्री पहिलो कृति भएकोले यसको विशेष महत्व छ भन्नुभएको छ । सहर बिनाको सहरले तराई मधेसका समस्या, संस्कार, भूगोल र सम्भावना समेटेर नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन खोजेको कुरा पनि उहाँले बताउनुभयो । यस किसिमको कृतिले हिमाल, पहाड र तराईका जनताबीचको भावनात्मक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने कुरा पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सहर बिनाको सहर पुस्तकको भूमिका पनि डा. राजेन्द्र बिमलले नै लेख्नुभएको छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ– ‘पुडासैनीका कविता बाह्य र आन्तरिक सत्यका साक्षी हुन् । यी सत्यहरु उच्च कलाको आवरणमा सजिएका छन्, कलात्मक छन् । कवि पुडासैनीले कुशल चिकित्सकलेझैँ मधेसको विविध रङ्गी जीवन, परिवेश र मनोविज्ञानको एम.आर.आई को काव्यिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उसको पीडा, निदान र उपचार अनशंसित गरेका छन् । संग्रहको पहिलो वर्णदेखि अन्तिम वर्णसम्म मधेसको माटोको इत्रमा चुर्लुम्म डुबेको छ, मगमग बास्नाले लठ्याउँदै । पाठकको मनै मिथिला भएर धड्किन थाल्छ ।
वरिष्ठ कवि दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’ ले आफ्नो काव्यसन्दर्भमा– ‘मधेसमा हिमाल उठाउन खोज्नेहरु र हिमालमा मधेस व्युँझाउन खोज्नेहरु, आँखाका नानी हुन् हामी सबैका । मैले हिमालको पानी र मधेसको जवानी, मिसाउन खोजेको हुँ नेपालभरी’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पुडासैनीको यो कविता संग्रह साझा प्रकाशनले प्रकाशमा ल्याएको हो । सहरबिनाको सहर प्रकाशन गर्नुृको औचित्य पुष्टि गर्दै साझा प्रकाशन लेख्छ– ‘देशबिना मधेस, मुुटुबिना शरीरको कल्पना गर्न नसकिने यथार्थको प्रतिबिम्ब हो देश–मधेस । बोलेको छ आवाजहरु सशक्त–यथार्थको । मधेसमा रचिएका कविताहरुको सुन्दर प्रस्तुति बनेको छ सहरबिनाको सहर ।’
पुडासैनीको यो चौधौँ कृति हो । यस अघि उनका सात कविता संग्रह, पाँच नियात्रा संग्रह र एक दर्शन कृति प्रकाशित छन् । पुडासैनी नेपाल सरकारका सह–सचिव अर्थात् महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नायब महालेखा परीक्षकको रुपमा कार्यरत छन् ।
Previous Previous post: मृत्यु दावी तथा घातक रोगवापतको दावी भुक्तानी रकम हस्तान्तरण
Next Next post: विवाहित महिलाहरुको सौन्दर्य प्रतियोगितामा ३७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा
केही मुक्तकहरु-कल्पना पौडेल ‘जिज्ञासु’
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय गजल महोत्सव आयोजना गर्ने
साहित्यकार स्व.कर्णकुमार श्रेष्ठको ‘उस्तै उस्तै मान्छे’ र ‘मनको सागर’ विमोचन
पद्मश्री साधना सम्मान र पुरस्कार प्रदान, राशि ३ लाख पुर्‍याइयो
हिक्मत थापा ‘चिबोकका केटीहरू’ लिएर आउँदै
रगतको बाढी=शशी लुमूम्बू
गायिका राईको ‘जुनी’ विमोचन
कौशल राज खड्काको डेब्यु एल्बम ‘ मायाको डुङ्गा ‘ सार्वजनिक
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो, १२१२ जना संक्रमित
गृह मन्त्रालयकाे बजेट गत वर्षकाे भन्दा बढी, रक्षाकाे गत वर्षकै हाराहारीमा
ट्वीटर विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे ‘युद्ध’को घोषणा
दोलखामा फौजी किराले मकै सखाप पार्न थाल्यो
झापामा २८ जना कोरोना संक्रमित फेला, रौतहटमा एकै दिन ५६ जना थपिए
आज जेठ १६ गते शुक्रबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल